Maxay tahay danta Abiy Axmed ugu jirta inay heshiiyaan Muqdisho iyo Hargeysa? - BBC News Somali
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dadaal weyn ugu jira sidii uu heshiis uga dhex dhalin lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland, isagoo isbuucii hore hirgaliyay in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Biixi ay markii ugu horreysay isku arkaan xafiiskiisa Magaalada Addis Ababa.
Kulankaas kaddib waxaa khudbado hadal-heyn weyn dhaliyay kala jeediyay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Biixi.
12-kii bishan February, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo jeediyay in lala qaato raalligalin ku aaddan wixii ka dhacay gobollada Waqooyi iyo in jabhadihii dhanka kale ay garawshiyo sameeyaan.
Sidoo kale maanta ayuu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi jeediyay hadal u muuqday inuu soo dhaweeyay raalli galinta laakiin wuxuu gaashaanka ku dhuftay warar sheegayay in Farmaajo uu booqasho ku tagayo magaalada Hargeysa, inkastoo aan warkaas wali meel rasmi ah loo jaheynin
Biixi: Soomaaliya laba godob ayey gashay
Xigashada Sawirka, TELEFISHINKA QARANKA SOOMAALIYEED
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya
Dhanka kale, ma jiro wax war ah oo xafiska Ra'iisul asaaraha Itoobiya uu kasoo saaray arrimahan.
Hase yeeshee, waxaa su'aalo badan la iska weydiinayaa danaha Abiy Axmed ugu jira in ay heshiiyaan Muqdisho iyo Hargeysa, iyadoo Somaliland ay gooni isu taag ku dhawaaqday wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Barfasoor Ibraahim Faarax Bursaliid, oo ah aqoonyahan falanqeeya Arrimaha Gobolka ayaa isagoo BBC-da la hadlayay sheegay in Dr Abiy Axmed uu leeyahay ujeeddooyin dhowr ah.
Tan hore ayuu ku qeexay inay tahay sidii Itoobiya ay u hirgalin lahayd qandaraaskii muranka dhaliyay ee Dekedda Berbera.
"Heshiis labada dhinac dhex mara waa mid u xaglinaya in la xalaaleeyo heshiiskii Berbera ee shirkadda imaaraadka ee DP World, si Itoobiya ay u hesho saamigeedii ahaa 19%", ayuu yiri.
Prof Ibraahim Bursaliid
Sidoo kale Barfasoor Bursaliid ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya uu dano shakhsiyeed ka leeyahay arrintan.
"Abiy Axmed wuxuu rabaa in heshiiskaas uu ku adkeysto billaddii nabadda adduunka ee uu qaatay, isagoo raba inuu wali usii muuqdo inuu yahay hoggaamiye cusub oo geeska Afrika ah, oo nabad doon ah".
"Waa heshiis uu rabo inuu doorashada Itoobiya ka dhaceysa August 2020 cod uga helo dadka caalamiyiinta ah ee aaminsan goboleysiga iyo wax lamid ah, waa heshiis uu rabo inuu kusii xoojiyo qorshihii isdhex galka ahaa ee uu watay", ayuu yiri Bursaliid.
Muxuu hadalka Muuse Biixi u dhimi karaa dagaalka Abiy Axmed?
Xigashada Sawirka, Xafiiska Afhayeenka M JSL
"Madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaanaya Somaliland, horta waa hadal heyn, laakin hadal heyntaaba xun, madaxweynaha Soomaaliya , Maxamed Cabdullaahi, tallaabo wanaagsan buu qaaday marka uu yiri raalligalin baan bixinaynaa, laakin wuxuu ku dilay markuu yiri waan imanayaa Hargeysa," ayuu yiri Muuse Biixi oo jeedinayay khudbaddiisa sannadlaha ah.
Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda hadda ka jirta Soomaaliya ay tahay "tii ugu cadaawadda badneyd dhinaca Somaliland".
Barfasoor Ibraahim Bursaliid ayaa ka hadlaya waxa uu hadalkan u dhimayo isku dayga uu Dr Abiy Axmed ku doonayo in labada dhinac la isku soo dhaweeyo.
"Hadalkan Muuse Biixi uu sheegay wuxuu markhaati u yahay in wadahadallada ay curdan ahaayeen oo aan xitaa ceyriin gaarin. Laakiin waxaa la rabay in wadahadallada lasoo gaarsiiyo siyaasad, oo hoos laga soo billaabo. Marka waa la dadajinayaa waxaadna mooddaa wadahadallo la rabo in la iskula daarto", ayuu yiri.
Tan iyo markii uu xilka madaxweynaha qabtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa hakad ku jiray wadaxaajoodyadii u dhaxeeyay guddiyada ka kala socday Soomaaliya iyo Somaliland.
Inkastoo madaxweynaha Dowladda Federaalka uu soo magacaabay guddiga u qaabilsan wadahadallada, haddana waxaa jiray ismari waa ku aaddan halka laga sii ambaqaadayo howsha.
Somaliland ayaa dhankeeda shuruud ka dhigtay in haddii miiska la isugu imaanayo ay wadaxaajoodyadu kasii socdaan halkii ay marayeen markii ay jirtay dowladdii ka horreysay Farmaajo.
TOOS Mareykanka oo ka hadlay warqadaha ay hawada isku marinayaan Farmaajo iyo Rooble
Shan caqabadood oo aad u waaweyn oo hor taagan Joe Biden
Halyeygii lagu matalay filimka Hollywood-ka oo la ogaaday inuu yahay argagixiso